युनिसेफले करीव तीन दशकअघि बनाएको टेलिचलचित्र ‘उजेली’ हेर्नु भएको छ ? (यहाँबाट हेर्नुहोस) « Sajha Page
युनिसेफले करीव तीन दशकअघि बनाएको टेलिचलचित्र ‘उजेली’ हेर्नु भएको छ ? (यहाँबाट हेर्नुहोस)
प्रकाशित मिति: April 10, 2019
काठमाडौँ । बाल्यावस्थामै विवाह भइ चिकित्सकले चेतावनी दिँदा दिँदै आमा बनेकी १० वर्षीय उजेलीको कथा समेटिएको टेलिचलचित्र ‘उजेली’ हेर्नुहोस् । सन् १९९२ मा युनिसेफले बालविवाहको विरूद्धमा चेतना फैलाउन र कम उमेरमै विवाह गर्दा महिलाको जीवनमा पर्ने दुष्परिणामको बारेमा जानकारी दिन ‘उजेली’ निर्माण गरेको थियो । विभिन्न अवार्ड प्राप्त गरेको यो टेलिचलचित्र संसारभरका २० वटाभन्दा धेरै टेलिभिजन च्यानलहरूबाट प्रसारण भएको थियो ।